IRussia kakhulu yokuziqhenya, ngoba kule nsimu yabo enkulukazi yezwe ekhazimulayo ahlukile nemvelo reserves, ubuhle okumangazayo izintaba, elikhazimulayo futhi simema nge kwechibi futhi ekujuleni kwelwandle yayo. Ngaphezu eziningi ezihlukahlukene, eyethulwe Mother Earth, onjiniyela, abakhi , nezinye Abadali ngenjabulo kuyinto yobuciko emhlabeni. Nokho, kukhona esinye isici ehlukile, ephoqa amazwe amaningi nomona yeRussia. Lezi ezimbili inhlokodolobha: esemthethweni kanye namasiko. Futhi uma kuqala - eMoscow - emhlabeni wonke ukuphila yayo ebusuku futhi ukubonakaliswa 'eMoscow akakholelwa izinyembezi ", owesibili - Petersburg - iminyuziyamu abadumile, zasebusuku mhlophe futhi zizalela amabhuloho.
Nokho, inhloko-dolobha noma amasiko, njengoba ibizwa, North, izivakashi hhayi kuphela standard izikhumbuzo zomlando namasiko, kodwa futhi nezinye izindawo ezihehayo. Phakathi kwabo - Museum Chocolate. Petersburg, eziningi izindawo ezahlukene, ezilungele kusimangaze izivakashi nge nokubukisa yayo kanye nezixazululo ezintsha. ifa zomlando Akukhona nje, kodwa futhi zonke izinhlobo nezimfanelo ezingavamile zomunye amakhosi yesimanje kungabonakala enhlokodolobha enyakatho.
On saseNevsky Prospekt ulwandle izibiliboco
Chocolate Museum Petersburg ujabule pamper izivakashi yayo nge ukusetshenziswa ezithakazelisayo impahla amnandi. Le ndawo - ipharadesi elingokoqobo abathandi idili ngoswidi ngokufihla. Ngesikhathi ukuhamba ngokusebenzisa amatasatasa saseNevsky Prospekt ubufuna zithokozise elimnandi uswidi? Wena zizosiza ngokujabula embundwini lesikhungo lapho emehlweni presents i amazing kanye egcwele ubuhle bomhlaba ushokoledi. Museum kwavulwa Petersburg isikhathi eside. Kulokhu, noma isimo sezulu noma bema phandle kule ndawo nabo balujabulela njalo futhi baba nempumelelo. Futhi, lokho kuyinto mnandi lapha ungakwazi nje ngokubona ziphephile yinqaba futhi emangalisayo ezenziwe asendabeni amnandi, kodwa futhi ukuthenga omunye wabo ngezikhathi ezikhethekile noma nhlobo isizathu.
Touting emhlabeni kumnandi
Singasho ukuthi Museum ushokoledi Petersburg - ikakhulukazi Boutique lapho amakhasimende ungakwazi ukuthenga amaswidi okukhethekile. Lesi sikhungo ihlanganisa eziningi izitolo akhiwe ezindaweni ezahlukene. Chief phakathi kwabo yakhiwa amakamelo amathathu isendaweni saseNevsky Prospekt. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yalesi sikhungo wathola igama Boutique Museum. Kungabi kahle ukuze wazi ukuthi emnyango egumbini ngenhla esifanekisweni isidalwa kuhle fabulous ukuthi sifana noma Santa Claus, noma esingumuntu-bear. Ehlombe elale ndalo ibekwe iqhwa lokwela.
Izinketho nalelo ukunambitheka
Chocolate Museum Petersburg bahlangana phakathi kwezingange zalo eziningi izingcezu ehlukene, iyinye eyenziwe awukudla amnandi. Ngaphezu amathoyizi akhe amnandi umphelelisi marzipan, nogologo, utshwala kanye izithelo ezomisiwe. Ingena egumbini, kunzima ukuqonda ngesikhathi esisodwa ukuthi konke izungeza isivakashi, edliwayo. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana namaqhawe-movie owathandayo, futhi izibalo zomlando, nezilwane, kanye nemishini ezemidlalo. Izincwadi, izakhiwo, izimoto, amapeni lokunyenti, ngabe tinkomishi, nokunye okuningi wenziwe izinto best khekhe amnandi, hhayi kuphela e-Russia, kodwa futhi eYurophu. Chocolate Museum Petersburg inikeza izivakashi kanye izibiliboco kuphela imifino. Njengoba isizathu ngokwenza ziphephile kuthathwe ubisi ethathwe isoya.
INjabulo amehlo isisu
Yiqiniso, embukisweni touch ubumnandi noma kunjalo engenakwenzeka. Chocolate ulula kakhulu futhi engazinzile ukwandisa izinga lokushisa indaba, ngakho iyiphi touch kungonakalisa sibalo olubucayi. Uma iklayenti ufuna usathola uju e ukusetshenziswa kwaso, ungathenga indaba nje kuphela ozithandayo. Akumangazi ukuthi le ndawo ethandwa kakhulu: kukhona into ukujabulisa hhayi kuphela iso kodwa esiswini.
Nomhlobiso Bashkir. imihlobiso Bashkir namaphethini
Transformer-ultrabook - ukukhetha uxakekile ixazululwe
Izigaba eyinhloko nokwenza amathuluzi obuchwepheshe kanye nokwaziswa izinsiza
Izinkinga kanti ukuhlaziywa indaba V.Shukshin "ukunquma"